Abakhiqizi nabahlinzeki base-US / 16A (3.6KW) Ifektri yaseChina US / 16A (3.6KW)
I-Level2 5meter 16A Type 1 EV Ishaja yekhebuli yokushaja imoto yemoto
I-China Intengo eshibhile i-China EV Ishaja, Ikhebula Lokushaja Izimoto Zikagesi, Singanikeza amaklayenti ethu izinzuzo eziphelele kwikhwalithi yomkhiqizo nasekulawuleni izindleko, futhi manje sinezindawo ezahlukahlukene zezikhunta ezisuka kufemu eyikhulu. Njengokubuyekezwa komkhiqizo ngokushesha, siyaphumelela ekwenziweni kwempahla eminingi esezingeni eliphakeme yamakhasimende ethu futhi sithola idumela eliphakeme.
Ileveli 2 ye-EV Charger Unit ene-Type 1 Outlet 16A 3.5kw
Sisekela abathengi bethu ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nezinsizakalo ezisezingeni eliphakeme. Ukuba ngumkhiqizi onguchwepheshe kulo mkhakha, manje sesithole isipiliyoni sokusebenza esiphumelelayo ekukhiqizeni nasekuphatheni i-OEM Supply China 16A SAEJ1772 Electric Car Chargeing Unit enohlobo 1 Cable, Sigcina amashejuli wokulethwa afike ngesikhathi, imiklamo emisha, ikhwalithi ephezulu kanye nokwenza izinto obala abathengi. Imoto yethu kufanele kube ukuhambisa izimpahla ezisezingeni eliphakathi nesikhathi esibekiwe.